Isitoreji Sedijithali Sivumela Ukukhiqizwa Kweposi Ngesikhathi Sobhadane | I-NAB Khombisa Izindaba | I-2020 NAB Show Media Partner kanye noMkhiqizi weNAB Show LIVE. Izindaba Zokusakaza Zokusakaza
Ikhaya » Ukuphathwa kokuqukethwe » Isitoreji Sedijithali Sivumela Ukukhiqizwa Kweposi Ngesikhathi Sobhubhane
UTom Coughlin, amaCoughlin Associates
Ubhadane lweCovid-19 seluqhube izinhlangano eziningi zokukhiqiza ezithunyelwe zaya emsebenzini wokude. Lokhu kudale ukushintsha endleleni okuqukethwe kwemidiya okugcinwa ngayo. Into eyodwa ebalulekile ukuthembela okukhulu kwisitoreji samafu, noma ngabe kusuka esikhungweni sedatha yangasese noma kubaphakeli bokugcina amafu we-hyperscale. Kulesi sihloko sizobheka ukuqagela kwethu kokukhula okuphelele kwesitoreji sangemuva kokukhiqizwa bese kuba yiminikelo nokuqonda okuvela ku-2020 IBC, i-2020 I-NAB Bonisa INew York nokubonisana ngezinkampani ezahlukahlukene okuzosiza izindawo zokwenziwa ngemuva kokukhiqiza ukuthi ziqhubeke nokusebenza, zilawule izindleko zazo futhi zenyuse umkhiqizo wazo.
Lesi sibalo esingezansi sihlela ukufunwa minyaka yonke kumthamo wesitoreji wokukhiqizwa kwangemva kokukhiqizwa, kufaka phakathi i-NLE, ukuqeda amandla okugcina okunamathiselwe ngqo kanye nenethiwekhi. Sifaka ukuphuma okuhlukile kwesitoreji esikude (samafu) sokugeleza kokusebenzisana kokubambisana. Qaphela ukuthi ngenxa yobhadane lweCovid-19 futhi abantu abaningi abasebenza ekhaya iningi le-2020 futhi okungenzeka kube yingxenye ye-2021 sikhankasela ukuqhuma okukhulu ekusetshenzisweni kwesitoreji sefu sokukhiqiza ngemuva kokuqalisa ngo-2020 kuqhathaniswa no-2019 (kusuka ku-8% kuya ku 20% ngokulandelana) futhi iyaqhubeka nokwanda ngo-2025.
Ngokwanda kokugcinwa kwamafu okwenziwa ngemuva kokukhiqizwa sizoqala sibheke intuthuko efaka isitoreji samafu ekusetshenzisweni kwemithombo yezindaba nokuzijabulisa okuvela kubathengisi abahlukahlukene.
Isitoreji Samafu Sokukhiqizwa Kwe-Remote Post
AvidIsixazululo sesitoreji seNexis 2020 sinikeza ukuhamba komsebenzi ngokubambisana kusuka noma ikuphi kwimidiya ecebile. Ibuye inikeze nge-40% yesitoreji esabiwe ngaphezulu ku-footprint efanayo isebenzisa ama-HDD wamandla aphakeme, ilungiselela ukubukwa kokuqukethwe ukuqeda isikhathi sokuphumula nokulahleka kwedatha kanye nokubeka okuguqukayo kwesitoreji okuhlanganisa izakhiwo nezinsiza zefu. Iphinde inikeze ukusekelwa okubanzi kwamathuluzi wesithathu.
Intshisekelo yokusebenzisa ifu ekuhambeni komsebenzi okwenziwe ngemuva kokukhula iyakhula. Avid benze ucwaningo kumakhasimende abo ngo-2020 ngaphambi kokuba kuhlasele ubhadane lweCovid-19 futhi bathola ukuthi kuphela u-20% wamakhasimende angahlelile ukusebenzisa isitoreji samafu, kuyilapho ama-40% athe azosebenzisa ngaphansi kuka-100TB, u-30% athe azosebenzisa U-0.5-1PB no-10% bathe bazosebenzisa ngaphezu kwe-1PB yesitoreji samafu. Lesi sibalo esingezansi siyakhombisa AvidUkuhlelwa kwemikhiqizo yokugcina kufaka phakathi Avid I-Nexis / i-Cloudspaces yokuhlanganisa indawo esendaweni yokugcina amafu.
Avid wabuye wathi wenze ukwethulwa okuthambile kokugijima Avid Umqambi weMidiya emshinini obonakalayo futhi usebenzisa iziqukathi zeKubernetes endaweni yokuhlela, efinyelelwe kusetshenziswa iTeredici, nesitoreji samafu seNexis esinikeza ukuhlela okufunwayo njengoba kukhonjisiwe ngezansi.
I-Scale Logic ibikhombisa lapho i-Remote Access Portal, into esebenza nge-1U Linux eyenza ukufinyelela okukude kusitoreji sendawo yakho kokubili ukuhamba kommeleli nokuxazulula okuphezulu, njengoba kukhonjisiwe ngezansi. Qaphela ukuthi iklayenti lendawo i-HDD noma i-SSD ingasetshenziswa njenge-cache yendawo ukuthuthukisa ukusebenza.
Izinqubo zokuvumelanisa zenzeka ngemuva ngaphandle kokuthi umhleli enze noma yini futhi iphrojekthi egcinwe ikude ivumelanisa ibuyiselwe kwisitoreji sendawo ngokuzenzekelayo ukuze abanye bakwazi ukubona ushintsho.
I-Editshare wanikezwa i I-NAB Bonisa umklomelo womklomelo wonyaka engqungqutheleni ye-2020 NAB NY. Le nkampani ikhiphe inguqulo entsha yohlelo lwayo lwamafayela i-EFS 2020 ngoJulayi 2020. Ngokusho kwenkampani, “Uhlelo lwamafayela olwenzelwe abezindaba lubonisa ukuthuthuka kwezokuphepha kuzo zonke izingqimba nokusebenza okuthuthukisiwe kulo lonke ibhodi. Ngaphezu kwamathuluzi okuphatha isitoreji anamandla akhelwe i-EFS, i-API entsha ye-RESTful ivula umnyango wamakhasimende nabalingani bezobuchwepheshe ukuze basebenzise ukuhamba okuphezulu kokulawulwa kwesitoreji endaweni ephephile. Ihambisana ngokugcwele nenguqulo yakamuva ye-FLOW, i-EFS inika amandla izinhlangano zemidiya ukuthi zikwazi ukwakha ukugeleza kokusebenza okubanzi, zivikele abasebenzi bezobuciko ebuchwephesheni obuyisisekelo ngenkathi kuhlomisa amaqembu ezobuchwepheshe ngamathuluzi okuphatha abezindaba. ”
Uhlobo lwakamuva lwe-EFS lusekela ukuhamba komsebenzi kwamafu kufaka phakathi i-AWS, iTencent Cloud nabanye. Abaphathi be-IT nabaphathi banokulawulwa okuhle kokuqukethwe kokuqukethwe, ukwakheka kwefolda nokugeleza kokuqukethwe ukunika amandla ukusebenzisana okungcono ekusebenzeni kwamasayithi amaningi nemisebenzi eminingi.
Hlela ukwabelana futhi ithe ibisiza abasakazi nezinkampani zemidiya ukuthi zikhuphule umkhiqizo wazo wokuqukethwe okukude nesitoreji sayo esabiwe se-EFS kanye nesisombululo sokuphathwa kwemidiya seFLOW. Le nkampani ithe ngesikhathi sobhadane inkampani yasePhilippine Long Distance Telephone (i-PLDT) isebenzise izixazululo zokubambisana ze-comnpany ukwenza ngaphezulu kokugeleza kokusebenza okungu-50 okwenziwe ngezandla nokwenyusa okukhiphayo kokuqukethwe kokukhiqiza okufika kuma-40%. Isithombe esingezansi sikhombisa ukukhiqizwa kokuthunyelwe okukude kusetshenziswa Hlela ukwabelana imikhiqizo
Facilis yayiku-2020 ebonakalayo Ukubonisa kwe-NAB NY. Facilis inikeza ukusebenza okuphezulu okwabiwe kokukhiqizwa kwemidiya esebenzisana. Intuthuko yakamuva yenkampani ifaka inguqulo 8.05 ye- Facilis Izinhlelo Zokuhlanganyela Ezabelwe, inguqulo 3.6 yesoftware yayo yeFasTracker Media Asset Management kanye ne-new Facilis Ukuvumelanisa kwe-Edge kokufinyelela okukude kwesibonisi.
The Facilis I-Shared Storage Version 8.05 ifaka phakathi isoftware echazwe kuqala ye-bandwidth, i-SSD tiering kanye ne-multi-disk parity. I-Bandwidth Priority iletha ukufakwa okugcwele kuzo zonke iziteshi zomsebenzi ngesikhathi sokusebenza okujwayelekile kepha kubeka phambili izikhungo zokusebenzela ukugcina ukuphuma okukhulu lapho iseva ingena esimweni sokulayisha okuphezulu. Lokhu kulungiselelwa okubalulekile kunamandla futhi kungathinta ukusebenza kwamakhasimende kungakapheli imizuzwana yokufaka isicelo.
I-Multi-disk Parity echazwe yi-Software ingavunyelwa ukwehluleka kokushayela okungafika ku-4 ngeqembu ngalinye ledrayivu, ngokuya ngephrojekthi, ngokuya ngevolumu. Lobu buchwepheshe buvumela abanikazi bezinhlelo zokuguga ukuthi bavikele kangcono izimpahla zabo ekulahlekelweni kwedatha ngenxa yokuhluleka kokushayela. I-SSD ne-HDD tiering yathuthukiswa ukuletha isivinini esizinikezele kumaphrojekthi adinga ukusebenza kwezinga le-SSD, ngenkathi kugcinwa isibuko esingapheli se-HDD.
Facilis I-Edge Sync iqala ngo- Facilis Isoftware ye-Object Cloud esebenzisa eyomdabu Facilis ivolumu ebonakalayo njenge-cache yendawo yediski futhi ingeza i-database ezinikele ye-Azure Cosmos DB ukuvumelanisa amadesktops amaningi ndawonye kuhlelo olulodwa lwefayela. Ngefayela le- Facilis I-Edge Node efakwe ezindaweni ezikude, indlela yamafayela wemidiya namafayela wephrojekthi afana ncamashi, noma ngabe usebenza endaweni noma ekhaya. Noma yiluphi ushintsho noma okungeziwe kumafayili wephrojekthi kuvuselelwa ngokushesha kuyo yonke indawo. Lesi sibalo esingezansi
ICinesite ihlangene nayo Qumulo kanye ne-AWS ukuvumela opopayi bayo namaphayiphi e-VFX aziphakamise QumuloIzinsizakalo zedatha yamafayili e-hybrid zokuletha ividiyo efinyelela ku-16K. Lapho ubhekene nezinkinga zokumiswa ngezikhathi ezithile ngendlela esanda kuthengwa yeqoqo le-Cinesite lesitoreji Qumulo, othumele ngokushesha ama-hardware node onsite futhi wenza inkampani yasebenza futhi.
Kamuva, ukuze kuqhume ifu ukukala amandla alo wokunikela, inkampani yaphazamiseka Qumulo isitoreji sefu esivumele inhlangano ukuthi isonge imishini futhi igcine idatha ku-AWS. A Qumulo case case ithi “QumuloIsoftware yefayili eyi-hybrid isebenzisa uhlelo olufanayo lwebhizinisi efwini njenge-on-prem, futhi idatha ingaphindaphindeka ngokwendabuko nangomthungo phakathi kwezimo noma kuzo zonke izifunda. Ukuqhuma kuya kuma-20, 200, noma ngisho ne-2,000 ikhwalithi ephezulu yokunikeza ama-node ku-AWS nge Qumulo ukugcina ukuhambisana nawo wonke lawo mandla akunankinga. Izimo zingaphothwa ngemizuzu, bese zidilizwa ngokushesha okukhulu. "
I-Integrated Media Technologies (IMT) imemezele ukuthi isoftware yayo ye-SoDA ihlanganiswe ne-Dalet's Ooyala Flex Media Platform ukwenza lula ukudluliswa okuphephile kokuhlakanipha okufakelwayo nokuqukethwe komshini wokusakazwa komshini kufu. Ukuhlanganiswa kwesoftware ye-IMT SoDA kanye ne-Dalet's Ooyala Flex Media Platform kunikezwa e-United States nase-Europe.
Isixazululo esihlanganyelwe sizobhekana nezidingo zokuphathwa kwedatha yemidiya ngokunciphisa ukudluliswa kokuhamba kwedatha okukhulu ngenkathi kuhanjiswa indlela elula yokuhamba kwedatha yokuqukethwe kokudala. Ukukhiqizwa kokuthunyelwa kanye nezinsizakalo zemidiya amakhasimende azokwazi ukubikezela izindleko nesikhathi sokuhambisa amafayili usebenzisa i-SoDA ngaphambi kokudluliswa kwesitoreji, okubenza bakwazi ukwenza izinqumo ezihlakaniphile ekuphathweni kwedatha nokugcina izindleko zeprojekthi kusabelomali noma ngaphansi kwesabelomali.
Ukuthembela okwandayo efwini ngomsebenzi wokubambisana okukude kuzokhula ngezinga eliphakeme ngemuva kokuphela kwesipiliyoni samanje sobhadane. Noma kusefwini noma emagcekeni, izixazululo ezahlukahlukene zesitoreji esiqinile zizosiza abahleli ukuthi babhekane nosayizi owandayo wokuqukethwe kwamavidiyo adinga ukugcinwa kokusebenza okuphezulu ukuze banikeze isipiliyoni sesikhathi sangempela esidingwa yilaba bachwepheshe. Ake sibheke ezinye zezixazululo zakamuva zokugcina isimo zomkhakha we-M & E.
Izixazululo Zesitoreji Sombuso Esiqinile
INetApp's Cloud Manager inikeza ukuphathwa okuqhutshwa inqubomgomo kokugcinwa kwesicelo kanye nedatha kubanikezeli bamafu abaningi bomphakathi nasezindaweni ezisendaweni. I-Spot by NetApp Product Suite ihlinzeka ngama-analytics engqalasizinda yamafu, ukwenziwa kwezindleko, ukwenziwa komthamo nokusebenza kahle kweziqukathi ze-Kubernetes. I-ONTAP 9.8 yenkampani inikeza ukwanda kokuhlanganiswa kwamafu nokutholakala kwedatha kwezinhlelo zebhizinisi. I-ONTAP 9.8 inikeza ukwakhiwa kwesilondolozi samafu se-hybrid, ukutholakala okuqhubekayo nokuphathwa kwedatha okuhlanganisiwe ngaphezulu kwe-SAN, NAS nokugcinwa kwento.
INetApp sekuyisikhathi eside isekela ukugqwayiza kwe-Dreamworks, okudinga ibhalansi yomthamo wokugcina nokusebenza. I-FAS500f entsha (ekhonjiswe ngezansi) iyiloluhlu lokugcina olunamakhono amaningi we-flash (kuze kufike ku-734TB amandla aluhlaza neshalofu lokunweba) kusetshenziswa i-QLC flash SSDs ukuhlinzeka ngomthamo ophakeme. Lo mkhiqizo usuphela ukuqeda ukwesekwa kwe-NVMe futhi uphethwe yisoftware ye-ONTAP yeNetApp. Umkhiqizo ubhekiswe kuzinhlelo zokusebenza zedatha ezingakhiwanga ngevolumu ephezulu, njengemidiya nokuzijabulisa nokugqwayiza.
Ku-2020 IBC ATTO ibikhombisa i-SiliconDisk RAM yabo esekwe, yokusebenza okuphezulu kokugcina, ngamandla akhangisiwe we-128GB ne-512GB. Usebenzisa i-RAM, kunokuba i-flash memory, lo mkhiqizo unikeza ukusebenza okuphezulu kakhulu, ngentengo.
Lo mkhiqizo uhlinzeka ngemigqa engaphansi kuka-600 ns futhi ifike ku-6.4M 4K IOPS kanye ne-bandwidth yokudlulisa idatha efinyelela kuma-25 GB / s. Iza nezimbobo ze-4 100 Gb Ethernet eziphelele ze-400Gb yomkhawulokudonsa. Ngokusho kwenkampani, "Idatha igcinwa khona manjalo iphinde itholakale ngejubane eliyisimanga likuvumela ukuthi uhlele ukusakazwa okuningi kwevidiyo, uthwebule izimo eziningi zedatha ye-AI / ML, usebenzise amasethi wedatha amaningi ngokushesha, futhi unikeze ukusebenza okumangazayo kokubheka izinkomba."
I-SiliconDisk ifaka i-optimizer yesikhathi sangempela enikezela ama-analytics wokusebenza ekuxhumekeni kwenethiwekhi yakho yesitoreji, ukusetshenziswa kwesitoreji kanye nokusebenza kwedatha kwe-SiliconDisk. Futhi ine-xCORE I / O ukusheshisa, ukuphatha ukufundwa nokubhala cishe cishe zero okungeziwe kokucubungula ngaphezulu. Futhi, usebenzisa i-DRAM, esikhundleni sememori ye-flash, uhlelo aludingi ukuphatha ukugqokwa kwemidiya.
U-Excelero umemezele ukuthi iDigitalFilm Tree isebenzise isitoreji sayo se-NVMe esinwebekayo (i-NVMesh) ukuhlinzeka nge-10X yokuhlinzeka ngokusheshisa kanye ne-100X yokugcina ngokushesha. Ngokusho kwenkampani, “isitoreji se-NVMesh esichazwe nge-software esisabalalisiwe sokusebenza okuphezulu kwekhompiyutha sinika abasebenzisi amandla ngokugcina okungcono. Amakhasimende ayazuza kuzinsizakusebenza ezabiwe ze-NVMe kuyo yonke inethiwekhi, ukufinyelela ekususeni i-NVMe ngejubane lasendaweni - nokusebenza okudlula umkhawulo wamandla we-flash yendawo kumaseva.
Ku-NVMesh indlela yedatha isebenza kuphela ohlangothini lweklayenti, engabandakanyi imijikelezo ye-CPU ohlangothini lweseva. Lokhu kuthakazelisa ikakhulukazi izicelo ze-hyperscale njengoba kungekho mphumela womakhelwane onomsindo. Ingxenye ebalulekile ekwakhiweni kwezakhiwo ze-NVMesh yi-TOpology MAnager (TOMA), ingxenye ehlakaniphile yokuphatha iqoqo ehlinzeka ngokusebenza kwezindiza zokulawula ivolumu futhi enika amandla amasevisi wedatha afana ne-RAID, ukusula amakhodi nokwabelana kwedatha (phakathi kwemishini yamakhasimende). Indlela eqondile yedatha esebenzayo kusuka kusicelo iye kwisitoreji se-NVMe ikhonjiswe esithombeni esingezansi.
Njengesibonelo seNVMesh emsebenzini, iqembu elikhiqizayo I-Prime Rewind: Ngaphakathi kwabafana, umbukiso wangaphambi kwesizini 2 yochungechunge lwe-superhero ne-vigilante ye-Amazon Prime Video The Boys, Uhlelo lwe-DFT lubhekane nokuhlolwa kwesixazululo salo esisha se-Excelero-powered storage. Ithimba lokukhiqiza belidinga ukucubungula amahora angama-40 ama-dailies alayishwe amaklayenti, liwaxhase, lenze ama-proxies wokuhlela ngokushesha, liwacubungule futhi liwahambise emnyangweni wawo wokuhlela - ngamahora ayi-10 kuphela.
I-VAST inikeza lokho eyakubiza ngokuthi yiDatha Universal Storage eyisebenzisayo Intel I-Optane NVMe SSD njengoqwembe lwe-cache lwesendlalelo sokugcina se-QLC NVMe njengoba kukhonjisiwe ngezansi. Le nkampani ithi lobu buciko besitoreji buhlinzeka ngokugcinwa kwezindleko eziphansi kakhulu okusetshenziswa kuma-studio wezithombe, amaligi ezemidlalo nokusakaza.
Ekuqaleni kwe-IBC, uCloudian umemezele ukuthi isoftware yayo yokugcina izinto manje isilungiselelwe ukukhanya, inika amandla amabhizinisi ukuthi ahlangabezane nezidingo zomsebenzi osebenza ngamandla ngenkathi kufakwa ama-flash nama-node asuselwa ku-HDD ane-hybrid bakhiwo evumela amakhasimende ukuthi anciphise inani kubiza ngama-40% ngokufaka idatha engejwayelekile esetshenziswa kusitoreji se-HDD. IHyperStore iyatholakala njengesixazululo sesoftware kuphela noma kusisetshenziswa esivele silungisiwe, uchungechunge lweHyperStore Flash 1000. IHyperStore Flash 1000 inikela ngamakhono angama-77TB kanye ne-154TB kwifomu eyi-1U futhi iboniswa ngezansi.
Ngokusho kwenkampani, “Isoftware entsha ka-Cloudian eletha ukukhanya iletha ukusebenza okudingekayo ngenkathi inikeza zonke izinzuzo zesitoreji sendawo yokugcina izinto ebhizinisini le-Cloudian, kufaka phakathi ukuhambisana okugcwele kwe-S3, ukuphepha okuhola phambili kwezimboni nezici zokuphatha ezithuthukile njengokuqashwa okuningi kanye ikhwalithi yesevisi. I-HyperStore elungiselelwe i-Flash ifaka iphrofayili ye-I / O eyehlisiwe ye-flash media kwi-hardware esezingeni lomkhakha, eletha ukufundwa kwento ethile nokufinyelela kwedatha yokubambezeleka okuncane esikalini. Ipulatifomu kaCloudian iqinisekiswe ngabahlinzeki abahola phambili be-NVMe njenge Intel futhi Kioxia futhi kuyinto Intel I-Optane ilungele ukusebenza okukhulu kakhulu. ”
I-Open Drives imemezele ukutholakala kwengxenyekazi yayo yesoftware ye-Atlas 2.1 enika amandla izixazululo zayo zokugcina i-OpenDrives. Isoftware entsha isebenza kungxenyekazi yenkampani esanda kukhishwa ye-Ultra Hardware, ekhonjiswe ngezansi, manje esefaka ama-NVMe SSDs kumkhiqizo wayo wokugcina futhi olinganiselwa ngama-HDD kumkhiqizo wayo we-Optimum. Lokhu kuboniswe ngezansi kanye nomkhiqizo wamalungu we-Momentum HDD.
I-Atlas 2.1 inezici ezivumela izinkampani ukuthi zikhulule kakhulu ngenkathi zigcina ukusebenza kwesikali. Lezi zici zifaka: ukuhlanganiswa kwesitoreji, amasistimu wefayela asatshalalisiwe, ukufaka amakhonteyina, ukuzenzekelayo okunemibandela, ukuphathwa okuphakathi nokubonakala, ukusekelwa kokugcinwa kwamafu, nokutholakala okuphezulu.
Ukuhlanganiswa kwesitoreji kuvumela amadivayisi wokukala, noma ama-node, ukuthi ahlanganiswe ndawonye akha iqoqo. Le ndlela yokwakha ehambisanayo inika amandla umthwalo olinganiselayo phakathi kwama-cluster node ngaphandle kokudela ukusebenza kokusebenza okunjenge-latency eyandisiwe.
I-Containerization iletha imisebenzi efana ne-compute kanye nohlelo ngokwalo eduze nalapho kuhlala khona idatha. I-OpenDrives isondele ekuhlanganisweni kwe-containerization kusukela ekubukweni kwesitoreji. Ngalokhu, inkampani ithi i-OpenDrives iyakwazi ukufeza izinzuzo ezinkulu zokusebenza ngokuletha idatha ngokukhaliphile nangokufanelekile esitsheni.
Ukuzenzakalela okunemibandela kuyisici esihambisanayo ekuhlanganisweni kwesiqukathi, okunika amandla izenzo zokucupha, ezinjengezenzo ezenzelwe isikhathi noma ezenzelwe amafayela, ukudala imisebenzi ezenzakalelayo evutha futhi isebenze ngaphandle kweminye imisebenzi. Ukuphathwa okumaphakathi nokubonakala ngefasitela elilodwa lengilazi kunika ama-opharetha ukuqonda ekusebenzeni kwengqalasizinda yesitoreji futhi kusiza ukulungisa kangcono amasethingi wokushintsha ama-node namaqoqo wokugcina.
Ukusekelwa kwesitoreji samafu kwenza abasebenzisi bakwazi ukuthumela nokwamukela zombili izakhiwo ezisemagcekeni nedatha yamafu ngephrothokholi ye-S3 nokwabelana ngamatshegethi akude we-S3 ngokusebenzisa i-Service Message Blocks (SMB) endaweni yangakini. Ukutholakala okuphezulu kulawula ukuqhubeka kokusebenza ukuze amakhasimende akwazi ukulungisa ama-standby node asebenza lapho idivayisi eyinhloko yehla.
Ukugcinwa kwamafu nokuma okuqinile kuguqula indlela esisebenza ngayo kokuqukethwe kwemidiya. Kepha kochwepheshe abasebenza ekhaya noma endaweni encane isitoreji sendawo singanikeza ukusebenza okuphezulu kakhulu. Ake sibheke iminikelo yokugcina yendawo emisha futhi evuselelwe yezinhlelo zokusebenza ze-M & E.
Imikhiqizo Yokugcina Ukuhamba Komsebenzi Wendawo
I-Promise Technology yethule iPegasusPro yayo, ku-2020 IBC, uhlelo lwe-Thunderbolt 3 DAS kanye ne-NAS fusion ehlose ukuthuthukisa ukusebenza kahle kokuhamba komsebenzi ngokubambisana kwemidiya yedijithali. Umkhiqizo uhlinzeka ngokudluliswa kwedatha okusheshayo kusuka ku-DAS kuye ku-10GbE NAS futhi i-vise-versa kusetshenziswa ubuchwepheshe beFayileBoost yenkampani. Le nkampani ithi abantu abaningi bangaxhuma ngqo kwiPegasusPro ngeThunderbolt 3 futhi ngasikhathi sinye babelane ngomsebenzi wabo nabanye abanikeli beqembu ngaphezulu kwe-NAS. Ulayini womkhiqizo wePegasusPro uboniswa ngezansi.
ISeagate ihlinzeka ngama-EXB HDD JBOD ayo kanye nama-flash ayo eNtro All.
I-One Stop Systems ibinohambo lwamadokodo olubonakalayo ku-2020 IBC. Le nkampani ithi, "idizayina futhi yenze izinhlelo zokusebenza ezikhethekile zezimboni zemidiya, ezokuzijabulisa nezokubuka, isebenzisa amandla we-PCI Express, ama-accelerator wakamuva we-GPU kanye nesitoreji se-NVMe ukwenza izicelo ezifunwayo zekhompyutha kufaka phakathi ukunikezelwa kohlaka lokugcina, umcimbi omkhulu ukubona ngeso, isikhathi sangempela esinwetshiwe kanye nokukhiqizwa kwevidiyo okwenziwe nge-AI okuthuthukisiwe. Ukunikezwa kwe-OSS kufaka phakathi imboni ye-PCIe Gen 4 esembonini enikezela ngama-accelerators namarekhoda wevidiyo anokuphindaphindwe kabili komkhawuko wezinhlelo ezikhona kuze kufike ku-16 NVIDIA A100 GPUs ohlelweni olulodwa. I-OSS iletha i-AI ku-Fly ™ eletha ukusebenza kwe-datacenter endaweni yokusebenza nase-studio. ”
I-Synology imemezele ama-DS1621xs + ayo ku-2020 IBC. Ngokusho kwenkampani, “ama-DS1621xs + abelana ngeprosesa enamandla yeXeon etholakala kwamanye amadivayisi wesikhungo sedatha seSynology. Ngaphezulu kuka-3.1 GB / s seq. funda kanye no-1.8 GB / s seq. ukubhala ukusebenza kusho ukuthi ingabhekana namasethi wedatha amakhulu futhi isingathe abasebenzisi abaningi, ngejubane elisheshayo. Ibuye ibhangqwe nenkumbulo ye-ECC ngokuthembela okuphezulu, futhi uma kuhlanganiswa neBtrfs nezinye izinketho zokulondoloza idatha, abasebenzisi bangaqiniseka ukuthi idatha yabo iphephile. ” Umkhiqizo uboniswe ngezansi.
Izindawo eziyisithupha ze-3.5D zangaphakathi ze-HDD zinika amandla afinyelela ku-96TB omthamo wesitoreji eluhlaza. Amayunithi okukhulisa avumela ukukhuphula lokhu kube amabhayi ayi-16 namandla we-256TB. I-10GbE NIC eyengeziwe ingasheshisa ukunikeza amaphrojekthi noma inikeze ngokudluliswa okusheshayo kwemishini eminingi ebonakalayo. Umkhiqizo uhlinzeka insizakalo ye-NAS yendawo, ngenkathi ivumela ukufinyelela okukude ngesiphequluli sewebhu noma ngohlelo lokusebenza lweselula.
USimply wethule iSymplyWORKSPACE yayo ethuthukisiwe ye-2020 IBC ebonakalayo, isistimu yesitoreji esisebenzisa kakhulu i-StorNext6 yedesktop yabasebenzisi abaningi yeThunderbolt 3 SAN ene-axleed axle ai 2020 AI-based media asset management enamakhono okugcina kusuka ku-48 TB kuze kufike ku-366 TB, ekhonjiswe ngezansi. Le nkampani ithi le yunithi ingakwazi ukuxhasa abasebenzisi abangafika kwabayisishiyagalombili ababambisene emisebenzini ye-8K futhi isekela ukufinyelela okukude, ukuze abasebenzisi bakwazi ukufinyelela kuma-proxies kusistimu yabo bevela ekhaya. Ukuvikelwa kwe-Adv aced RAID kusiza ukuvikela izimpahla zemidiya nokusetshenziswa kwesitoreji sombuso esiqinile kusiza ukuthuthukisa ukusebenza kohlelo jikelele. I-axle ai isebenza kumshini obonakalayo we-Linux kuphrosesa ye-WORKSPACE Xeon.
Isitoreji Sedijithali se-2020 kuMbiko Wezindaba Nezokuzijabulisa
The Isitoreji Sedijithali se-2020 Sombiko Wezindaba Nezokuzijabulisa, okuvela kuCoughlin Associates, kunikela ngamakhasi angama-251 wokuhlaziywa okujulile kwendima yesitoreji sedijithali kuzo zonke izici zemidiya yezobuchwepheshe kanye nokuzijabulisa. Amaphrojekthi anikezwa i-2025 yokufunwa kwesitoreji sedijithali ekuthathweni kokuqukethwe, ngemuva kokukhiqizwa, ukusatshalaliswa kokuqukethwe nokufakwa kungobo yomlando kokuqukethwe kunikezwa kumatafula angama-62 nezibalo eziyi-129.
Umbiko uhlomule ngokufaka kochwepheshe abaningi embonini kubandakanya nabasebenzisi bokugcina kanye nabaphakeli bokugcina, okubandakanya ukuhlaziywa kwezomnotho kanye nokushicilelwa kwemboni kanye nezimemezelo, kusetshenziselwe ukudala imininingwane kubandakanya nalombiko. Njengomphumela wezinguquko kwezomnotho zamadivayisi wesitoreji ukusebenza okuphezulu kokugcina okuqinile kuzodlala indima enkulu ngokuzayo. Amafu nokugcinwa kwe-hybrid kufaka phakathi ifu sekuthathe ukubaluleka okusha kokugeleza kokusebenza okuningi ngesikhathi sobhadane lweCovid-19. Lapho ubhadane ludlula, ukusetshenziswa kwesitoreji samafu kuzoqhubeka nokukhula emakethe yemidiya neyokuzijabulisa eya phambili.
Ungathola okuningi noku-oda uqonde ku- tomcoughlin.com/product/digital-storage-for-media-and-ent Entertainment-report/
 Isitoreji Sedijithali se-2020 ku-Media and Entertainment, AbakwaCoughlin Associates, tomcoughlin.com/product/digital-storage-for-media-and-ent Entertainment-report/
UTom Coughlin, uMongameli, uCoughlin Associates ungumhlaziyi wesitoreji sedijithali nomxhumanisi webhizinisi nobuchwepheshe. Uneminyaka engaphezu kwengu-39 embonini yokugcina idatha enezikhundla zobunjiniyela nezokuphatha ezinkampanini eziningana. AbakwaCoughlin Associates bayabonisana, bashicilele izincwadi kanye nemibiko yezimakethe nezobuchwepheshe futhi bafaka imicimbi egxile kwidijithali. Ungumnikeli wesitoreji nokugcina imemori njalo forbes.com kanye namawebhusayithi enhlangano ye-M & E. Ungumuntu we-IEEE, uMongameli wangaphambilini we-IEEE-USA futhi usebenza ngeSNIA futhi SMPTE. Ukuthola imininingwane eminingi ngoTom Coughlin nezincwadi zakhe nemisebenzi iya ku www.tomcoughlin.com.
Ngaphambilini: Uhlelo Lokubonisa Okukhaliphile lukaDensitron lunikeza ukulawulwa kwesitudiyo “okuvumelana nezimo kakhulu” kuNEP ENetherlands
Olandelayo: I-Ultimate RV Show Goes Virtual, Custom Media Solutions Iletha Amahora angama-49 wokuqukethwe nge-FOR-A Switcher